Maxey yihiin baahiyaha Dhabta ah ee dowladda cusub laga rabo inay wax ka qabato? | Codka Shacabka Soomaaliyeed
Waxaan qabaa in madaxweynaha iyo Raisulwasaaraha uu magacaabay labaduba ay wax weyn ka ogyihiin baahiyaha dalka ka jira oo waa igala mugweyn yihiin in qoraal yar wax loogu soo gudbiyo, waxaanse rabaa inaan halkaan ku soo gudbiyo baahiyooyin gaar ah oo aan isleeyahay dowlad kasta oo timaada umaba aragto in ay tahay in muhiimadda la saaro. Waana kuwa aan aaminsanahay inay dowladda ku xiri karaan dadka ay dowladdu dowlad u tahy. Haddii aysan dowladda Raisulwasaare Xassan Cali Kheyre aysan si xowli ah aysan waxba uga qabannin baahiyahaas inaysan waxba dhaami doonin dowladihii horay dalka u soo maray oo intoodaba muhiimadda aan saarin baahiyaha dhabta ah ee ay dadku u baahan yihiin in si toos ah wax looga qabto.
Waxaanan la dhayalsan Karin arinta amniga oo badanaa dowlad kastaaba ay afka ka buuxiso iyada oo aanan aad loo fiirin waxyaabaha kaabaha u noqon karaa sidii dal Soomaaliya oo kale ah amni loogu heli lahaa, waxaan rabaa inta aanan baahiyaha aan sheegi doono aanan u gelin in dowladdu fahantaa in dalku uusan amni ku heli doonin askar, boliis iyo nabad sugid kaliya ee ay jiraan waxyaabo kaabo oo u baahan in dowladdaani ay siiso ahmiyad la eg midka ay siineyso ciidamada kala duwan ee aan horay u soo sheegay, waxaana ugu horreeya cadaaladda. Waxaan hubaa in loo baahn yahay in dalku yeesho cadaalad la isku haleyn karo oo ay dadku u siman yihiin oo uusan caddaalladda helin midka awood ciidan ama mid dhaqaale leh kaliya.
Lagu dooraye maxaa laguu doortay, maxaase lagaa filayaa?
Baahiyaha dhabta ah ee Madaxweyne Farmaajo iyo Raisulwasaare Kheyre loo baahan yahay inay wax ka qabtaan, waxaa ugu horeeya, una baahan inaan waqti badan la sugin, in la cadeeyo sida dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu u wada shaqeynayaan iyo xiriirka ka dhexeynaya sida uu kala sareynta maamulkoodu noqonayo. Waa in ay dowladdani ka shaqeyso sidii ay meesha uga saari laheyd buuqa maamul oo loo helo eray bixin dhalin karata isfahan ku dhisan isxushmeyn iyo isla shaqeyn dhalin karta in qorshaha iyo siyaasadda dowladda Federaalku inay ka hirgalaan maamul goboleedyada dalka ka jira iyada oo aysan jirin faro isku taagtaag oo uu maamul kasta garanayo meesha ay awoodiisu ku egtahay iyo weliba cidda la xisaabtameysa. Haddii aan taas la helin oo weliba la helin maxkamad Dastuur ee u kala gar qaadda haddii maamulladu doodi soo kala dhexgasho oo ku saabsan xeerka iyo habdhaqanka maamulka, waxaan ka cabsanayaa in dalku muddo ku sii jiro xeer jajab oo weliba afarta sano ee dowladdani heysato ku dhamaato iyada oo aan la xalin dhibka ugu weyn ee maamulka dalka dib inuu u dhigay una dhigi doono aan u maleynayo oo ah qaab maaulka Federaalka dalka ku soo kordhay oo aan haddana qodobeesneyn lagana yaabo haddii aan dhaqse wax looga qaban inuu jahwareer hor leh iyo dib u dhac dalka u keeno. Dowladdani waa inay si dhaqse leh wax uga qabataa arintaas.
Baahida labaad ee dalka ka jirta waa baahida adeegga bulshada. Dowladi waxa ay dowlad ku tahay waxa ay dadkeeda u qabato ee dowlad kuma aha waxa ay dadkeeda ka qaado oo kaliya. Laga soo billaabo dowladdii carte illaa iyo maanta magaaladda xarunta u ah dowladda federaalka ee Muqdisho oo ay degan yihiin dadka ugu badan ee hal magaalo degan dalka oo dhan, wax laga qaado ma ahane ma jirto wax ay dowladu u qabato. Waxaa taas la mid magaalo kasta oo Soomaaliya ku taallo oo ay maamul goboleed amaba qolo gooni ah ay maamulaan. Dhamaantood waxaa laga qaadaa lacag loo macneyn karo BAAD amaba BOOB, waayo wax kasta oo dadka laga qaado haddii aysan iyaga wax loogu qabneynin oo ayba yar tahay wax ay ka faa’iidayaan waxa ay dhiibayaan, aan dowladda su’aalee, dadkaasi miyeysan xaq u laheyn inay ka horyimaadaan amaba ay ka xagal daaciyaan amarrada dowladda? Dowladdu waa inay la timaadaa hufnaan dhalisa in dadku helaan adeeg bulsho oo isugu jira mid daryeel caafimaad iyo waxbarasho oo la isku haleyn karo oo haba yaraadee laga maalgeliyo hantida iyaga laga qaado. Hantida ugu badan dalka marka laga yimaado qeybaha kala duwan ee amniga ka shaqeeya, waxey gashaa shaqaalaha dowladda. Dalka waxaa ka jira shaqaale dowladeed oo aad u badan oo runtiina aanan waxweyn qabanin oo iyagu qaab siyaasadeesan lagu wada qoray oo u baahan in iyagana dib loo fiiriyo oo dowladdu inta ay u baahan tahay ma ahane inta kale xal loo helaa haddii la rabo in beekhaamin lagu sameeyo qarashaadka dowladda ee sida aan loo fiirsan u baxa si qarash adeeg bulsho lagu maal geliyo dalka loogu helo.
Inkastoo ay baahiyo badan dalka ka jiraan hadana, labadaas baahi ee aan kor ku sheegay ee kala ah dhisidda adeeg bulsho dhab ah oo la isku haleyn karo oo dowladdu maalgelineyso kana madax bannaan mucaawino maalinna timaada maalinna maqnaata iyo hagaajinta qaab maamulka ka dhexeeya maamulka federaalka iyo maamul goboleedyada, waxey soo dedejin karaa in kalsoonida dadku ku qabaan dowladdaan cusub ee uu madaxweynaha ka yahay Farmaajo ay saa’iddo una ekaato dowlad hanan karta ballamadii uu qaaday intii uu tartarka ku jiray. Maaanta duruufaha jira owgood dadku waxa ay lee yihiin “dowlaa gacan weyn” tii ka rumeysa ayey noqon haddii ay la timaado hufnaan maamuleed oo ku dhisan isla xisaabtan joogta ah oo uu cad yahay meesha la rabo In la gaaro muddo yar gudaheed.
W/Q Cabdixakiin Cali Casir.
« Dib u habeyn in lagu sameeyo qaabka waxbarashada dalka loo maamulo, waxey keeni kartaa in la helo waxbarasho tayeysan oo weliba la isku haleyn karo joogtana ah.
Talo walaal oo Taabid (Guddoomiyaha Cusub ee Gobolka Banaadir) ku socota. »